WARARKA BARAAWEPOST Khamiis 9 december 2010
Shirweynihii Guddiga fulinta Qowmiyadda Aw-Digil UK oo lagu qabtey Birmingham,UK.
Waxaa shir aad u ballaaran oo muhiim ah ka dhacey magaalada Birmingham ,uk, taariikhdu markey aheyd 05/12/10,oo ah maalin axad ah.
Shirkaasi oo ay isugu yimaadeen dhammaan guddiga fulinta qowmiyadda Aw-Digil ee UK. Shirkaasi waxaa looga hadley arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin: Samafalka qowmiyadda Aw-digil , iska warqabka qowmiyadda guud ahaan iyo aflagaadadii loo geystey odaayaashii digil iyo mirifle UK ee lagu soo qorey website-ka Baidoanews.com.
Shirkaasi wuxuu ku dhammaadey jawi aad u wanaagsan, waxaana ka soo baxey go�aanada hoos ku qoran:
1. Waxaan si buuxda u taagerney go�aankii odayaasha Digil iyo mirifle UK ay soo saareen oo ahaa:
� In si degdeg ah loo soo magacaabo guddi farsamo oo soo abaabula shirweyne guud oo ay u dhan yihiin qowmiyadda Digil iyo Mirifle UK, kaasoo lagudooran doono guddi mas�uul ka noqda qowmiyadda Digil iyo Mirifle UK.
2. Waxaan raali gelin buuxda ka bixineynaa gefkii iyo aflagaadadii loo geystey odayaasha Digil iyo Mirifle ee UK kuna soo baxey Website-ka Baidoanews.com taariikhdu markey aheyd 2/12/10.
3. Waxaan markhaati ka nahay oo aan caddeynayaa in odayaasha Digil iyo Mirifle UK u taagan yihiin har iyo habeen horumarka, midnimada, samafalka iyo xallinta khilaafaadka qowmiyadda digil iyo mirifle UK.
4. Waxaan talo u soo jeedineynaa dadkii ka dambeeyey qoraalka aflagaadada ah, in ay ka waantoobaan, iskana ilaaliyaan wax alla wixii dhibaato u keeni kara horumarka iyo midnimada qowmiyadda digil iyo mirifle UK
5. Markii wada tashiyo lala sameeyey salaadiinta iyo aqoonyahanada qowmiyadda Aw-Digil meel kasto oo ay joogaan, waxey soo saareen go�aankan oo ah:
� In magaca qowmiyadda Digil iyo Mirifle uu weligiisba ahaa Digil iyo Mirifle, ee uusan aheyn sida ayaamahan dambe lagu soo qoro website-ka baidoanews.com oo ah DigilMirifle
Sidaas daraadeed waxaan uga digeynaa dadka caadeystey iney qoraan magacaas beddelan (DIGILMIRIFLE) oo ay u daayaan sidii soo jireynka aheyd ee Digil iyo Mirifle.
Waxaa lagu sagootiyey Guddoomiyaha Qowmiyadda Aw-Digil UK Mudane Cabdulqaadir Ibraahim Caddaay oo safar shaqo ah oo ku wajahan horumarinta arrimaha Qowmiyadda ugu kicitimi doono qaaradaha Asia & Africa.
Guddiga Fulinta qowmiyadda Aw-Digil UK